Cajiibka: Web Qubeysi leh Miro qurxoon
Maanta waxaa jira siyaabo badan oo dadku u soo saari karaan xogta laga helo boggag kala duwan. Website-yo badan, sida Google iyo Facebook, waxay bixiyaan API-yadaas oo raadiyeyaasha webka isticmaali karaan si ay u helaan dhammaan macluumaadka qaraabada ee ay doonayaan. Hase yeeshe, dhammaan boggaga internetka ma ku qalabaysan yihiin APIs, maxaa yeelay waxaa laga yaabaa in aysan doonaynin akhristayaashooda inay soo ururiyaan wax kasta oo macluumaad ah iyaga ama sababtoo ah ma ayan lahayn qalab tiknoolajiyadeed. Laakiin maxuu sawirrada webka ku samayn karaa noocyada noocan ah? Sidee bay u soo saari karaan xogta haddii boggaga internetka aysan isticmaalin API? Xaqiiqdu waxay tahay in ay dhab ahaantii kala-rogi karaan bogagga internetka siyaabo badan.
Isticmaal dokumintiyada Google ee natiijooyin fiican
adigoo isticmaalaya Google Docs, waxay dhab ahaantii qaadan karaan dhammaan macluumaadka ay u baahan yihiin. Waxay ku dabaqi karaan ilaa luuqad kasta barnaamijka, sida Python. Python waa luqad aad u taraysa, taas oo sahlan in la isticmaalo loona ogolaado kombiyeyaashu inay isku xiraan mashruucooda adduunka dhabta ah. Waxay u oggolaaneysaa isticmaalayaasheeda inay muujiyaan fikradaha kala duwan ee laynka yar ee code ee luuqadaha barnaamijyada kale, sida Java. Maktabada Python waxay u ogolaataa in si dhakhso ah dib loogu soo celiyo shabakadda webka mashruuc oo waxay bixisaa maktabado badan si ay u fuliyaan qaar ka mid ah maktabadaha
makhaayad qurxoon (Maktabad Python) hawl. Tusaale ahaan, BeautifulSoup waa qalab fudud oo loogu talagalay hawlaha degdegga ah, sida soo jiidashada xogta kala duwan, sida liisaska, xidhiidhada, miisaska iyo wixii ka badan. Dhab ahaan, BeautifulSoup waxay bixisaa adeegsigeeda habab sahlan oo wax ku ool ah si ay u socdaan, raadiyaan una bedelaan xogta qaarkood. Tusaale ahaan, waxay qaadataa dukumiintiga HTML, oo ​​waxay ka dhigtaa, iyada oo abuuraysa qaab dhismeed oo ku xusan xasuusta. Waxaa intaa dheer, wuxuu si toos ah u rogaa dukumiintiyada soo socda ee Unicode, sidaas darteed dadka isticmaala ma aha inay ka fekeraan dhamaadka.
Qaababka Shimbir quruxsan
Isticmaalayaasha waxay ku rakibi karaan qalabkan wax ku-oolka ah ee nidaamka Windows iyo Linux. Kadibna, way ku socon karaan oo bartaan sida loo isticmaalo nidaamka si fudud. Waxay arki karaan dhammaan tusaalooyinka lagama maarmaanka ah si ay u helaan fikrad ah sida ay u isticmaalayaan nidaamkan. Tusaalooyinkani waxay ka caawinayaan inay fahmaan nidaamka si fiican. Waa hagid wax ku ool ah si aad u ogaato sida wanaagsan ee loo xakameyn karo xogta boggaga internetka ee kala duwan.
Waxay ka dhigaysaa xogta khafiifka ah sida dukumiintiga asalka ah. Laakiin haddii kiisaska ay jiraan waxoogaa khalad ah oo ku jira dukumiinti gaar ah, Shirkadda Qurxoon waxay soo saartaa oo bixisaa adeegsigeeda qaab dhismeed macquul ah. Quruxda quruxda badan waxay bixisaa qaar ka mid ah guryaha waaweyn, kuwaas oo siinaya magacyada magac-yada, si ay uga dhigaan kuwo aad u fudud kuwa isticmaala. Dharbaaxaha Webka waxay u baahan yihiin inay xasuustaan, tusaale ahaan, hal element wuxuu yeelan karaa noocyo badan oo fasallo ah iyo fasal ayaa loo qaybin karaa qaybaha. Mid kasta oo ka mid ah walxahan waxay yeelan karaan hal id, oo loo isticmaali karo bogga hal mar. Quruxda quruxda badan waa barnaamij weyn, oo loogu talagalay mashaariicda sida mashruucyada kala duwan. Waxay bixisaa habab sahlan oo loogu talagalay isticmaaleyaasheeda si ay u bedelaan geed geedka. Barnaamijkan luuqada waxaa lagu hormariyaa daboolka ugu fiican ee Python, sida LXML oo waa mid aad u jilicsan. Xaqiiqdii, waxay helaysaa xog xiran oo soo ururisa dhammaan macluumaadka lagama maarmaanka ah ee waraaqaha shabakadaha daqiiqadaha Source .